Abavelisi beemveliso china abavelisi base China abathengisi kunye nefektri
Imvulophu yokulala iibhegi
Umama Sleeping Bags
Yangaphandle ezemidlalo enemibala mummy ibhegi yokulala ukuba b ...
Ukuthungwa umbala-mbini ngemvulophu yokulala ngokungafaniyo ...
Imvulophu engabalulekanga yokulala ibhedi ene-Solid Co ...
Sifihle iqokobhe manzi rip-stop milita eziphathekayo ...
Intengiso eshushu yokugxotha amanzi e-mummy engenawo amanzi ...
Umenzi we-2020 ophakamileyo we-90% ezantsi elele ukulala ...
2019 mveliso abadala inkampu idada yangaphandle / irhanisi ...
2019 New kuyilo umenzi ukukhanya obutofotofo comfortabl ...
Imidlalo yangaphandle yokulala ibhegi yomama enokusetyenziswa kumacandelo e-OEM
Siyinkampani enamava angaphezu kweminyaka engama-20 yokuvelisa kunye nokuveliswa kweemveliso ezisezantsi. Ukuze sikwazi ukudibana nemiboniso eyahlukeneyo kwicandelo lobungcali, senze inkqubela phambili kubugcisa bemveli. Le mveliso inezinto ezahlukeneyo ezichaziweyo kunye noyilo olusebenzayo olukhethiweyo onokukhetha kulo ukuhlangabezana neemfuno zakho kwiindawo ezahlukeneyo, ilaphu langaphandle lale bhedi yokulala yenziwe nge-20D380T unyango lwenayiloni ye-DWR, enokuthintela ngokufanelekileyo ukunganyangeki kwamanzi, ukuphucula ukunganyangeki, kunye nokwenza lula ukucoca yonke imihla kunye nokhathalelo. Umbala wangaphakathi usebenzisa i-20D 380T ye-nylon velvet-proof fabric, inokuphefumla kakuhle kunye nokuthamba kolusu, okwenza abasebenzisi bakhululeke ngakumbi.
Sifihle iqokobhe elingangenisi mqengqeleki ongashukumiyo wokulala emkhosini kwimozulu ebanda kakhulu
Ngaba wakha wavuswa kubusuku obubandayo? Xa ulele engxoweni yokulala ententeni yakho, ungcangcazela kwaye ungcangcazela, ungakwazi ukulala ngokulula ngenxa yengqele, umamele umoya obandayo, imvula nekhephu ngaphandle, ngaba ujonge phambili ekubeni nengxowa yokulala enjalo ekuvumela ukuba wonwabe ubuthongo obufudumeleyo kwimozulu ebanda kakhulu? Ngoku lixesha lokuba uvumele ukhetho lwakho, ulifanele esi sixhobo.
Umenzi we-2020 ophakamileyo wama-90% ezele iibhedi zokulala ezinamaxabiso aphantsi
Ukuba usakhathazekile malunga nokuba ukhetha ntoni ibhegi yokulala ngaphandle, oku kuya kuba lolona khetho lwakho. Siqulunqe ngokukodwa ubunzima bokuzalisa ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno ezithile zabantu abahlukeneyo kwizikali zobushushu. Nokuba ukulungele ukuya ekampini, ukunyuka intaba, ukunyuka, ukuhamba ngebhayisikile, ukuloba, okanye ukuhamba, nokuba yintoni na.
2020 mveliso ubusika abadala inkampu idada / irhanisi phantsi ukulala ibhegi kwihowuliseyili
Le ngxowa ilala phantsi yenziwe nge-20D 400T engenawo moya, engenawo manzi kunye neenyembezi zenylon enganyangekiyo. Ingabugcina ngokufanelekileyo ubushushu, inciphise ukusasazeka kobushushu, ithintele umoya obandayo ukuba ungangeni, kwaye inesakhono esithile sokulwa neentsholongwane, isenza ukuba isempilweni ngakumbi kwaye isempilweni ukuba isetyenziswe yonke imihla.
I-2019 entsha yokuyila umenzi ukukhanya okunethezeka okunokupakishwa kwedada phantsi kwengxowa yokulala
Enye yeengxowa zokulala ezaziwa kakhulu zilungele ukuhamba intaba, ukuhamba ngeebhayisikile, ukubopha ubhaka kunye nokwenza inkampu, i-Luxury Luxury sisixhobo esithandwayo ezintliziyweni zabantu abahamba ngeenyawo nangobhaka, kwaye lukhetho oluphezulu kwabo bantu bafuna ukuhlala befudumele ezindulini ngexesha naliphi na ixesha lonyaka.
Intengiso eshushu yokuntywila amanzi ebaleka iingxowa zomama ezingangeni nomoya zabazingeli bomkhosi
Ezi ngxowa zokulala zifihliweyo zedijithali ziyilelwe ngokukodwa umkhosi, abaphandi, abazingeli kunye nabo bangabalandeli bezomkhosi. Kukho iintlobo ngeentlobo zemibala yokhetho, ezinokuthi zilungele ukuma kweendlela ezininzi ezahlukeneyo, ezinjengehlathi, isendle, iintaba njl.njl. Ezi zenziwe ngamalaphu eNylon angama-20D 380T, angangeni ngumoya, amanzi agxothayo, amileyo, ashushu kakhulu kunye nokunye ukusebenza ngokugqwesileyo.
Imibala emhlophe eguqukayo yemvulophu yokulala enemikhono efumanekayo ye-OEM
Le yimvulophu yokulala ibhegi enemibala eyahlukeneyo kunye nemisebenzi ekhethekileyo. Iyaziwa kakhulu kumazwe amaninzi kuba ayisiyi kuphela le bhedi yokulala inokusetyenziswa xa uphuma enkampini, kodwa nasekhaya. Ilaphu langaphandle lale bhegi yokulala lenziwe ngamalaphu enayiloni angama-20D 320T okanye angama-20D 380T. Ilaphu ngalinye liye laphathwa ngokukodwa, elinokubangela ukuxhathisa kunye nokumelana namanzi. Inokumelana nomoya onamandla, eyenza imveliso yomelele ngakumbi kwaye kulula ukuyicoca. Ilaphu langaphakathi lale bhegi yokulala ikwayi-20D 320T okanye i-20D 380T yelaphu yenylon.
2021 umbala oqaqambileyo odumileyo ezantsi ebhegi ezele ngumama
Ibhegi yokulala yomama yeklasikhi yimodeli ethandwa kakhulu phakathi kweengcali. Ngexesha lenkqubo yokuvelisa, siphucule ubugcisa bendabuko ukuphucula ubushushu kunye nentuthuzelo. Kwangelo xesha, bhekisa kwimibala ethandwayo yangoku yokwenza ukuba uthande ukukhempisha kunye nokunyuka intaba. Kukho ukhetho oluninzi lwefashoni. Ilaphu langaphandle lale bhegi yokulala li-20D 320T ilaphu ye-Nylon, ene-anti-ukubhola kunye nonyango lokugxotha amanzi, isenza ukuba yomelele ngakumbi kwaye inganyangeki ngumdaka kwaye kube lula ukuyicoca. Ingubo yelinen yenziwe nge-320T ipongee enokuphefumla kunye nelaphu enganyangekiyo yevelvet ukuphucula intuthuzelo yomsebenzisi. Ingaphakathi ligcwele i-800g 80% yedada phantsi, kwaye ubunzima obupheleleyo bujikeleze i-1050g.
Ukuthungwa kwemibala emibini kwimvulophu yokulala engavumelekanga kungagcwaliswa phantsi ebusika
Le yingxowa yokulala ethandwa kakhulu enesimbo sokuyilwa kwemibala emibini, inemfashini, kwaye ithandwa kakhulu kumaqonga e-commerce ahlukeneyo. Ayinangcinga yoyilo enesitayile kuphela, kodwa ikwalumke kakhulu kwimveliso. Uluhlu lwangaphandle lwenziwe ngelaphu leNylon ye-20D 380T ngonyango olukhethekileyo. Inomsebenzi wokuqhekeza ukuxhathisa kunye nokumelana namanzi, okulungele ukugcinwa kwansuku zonke nokucoca. Ilaphu langaphakathi lisebenzisa ifayibha ye-polyester eyi-20D 380T, ene-air air permeability, ithambe kakhulu kwaye ikulungele ukubamba. Ukuzaliswa kwangaphakathi yi-90% yedada phantsi kwaye ubunzima bokuzaliswa ngu-800g.
Imvulophu enye yokulala ibhedi yokulala ngombala oqinileyo wentwasahlobo kunye nekwindla
Le bhegi yokulala inyuselwa kwisiseko semvulophu yokulala yeklasikhi, efanelekileyo kakhulu kwiintsapho ezithanda ukwenza inkampu entwasahlobo nasekwindla. Umaleko wangaphandle wale bhegi yokulala wenziwe ngelaphu leNylon elinganyangeki ziinyembezi i-20D 380T, kwaye iphathwe ngamanzi agxothayo, amelana ngakumbi nokungcola kwaye kulula ukucoceka ngexesha lokusetyenziswa; ilaphu yangaphakathi yenziwe 20D 380T ipholiyesta ifayibha, nto leyo ethambileyo kwaye agudileyo kwebala.
Ilali yaseDazhangzhuang, Anxin County, Baoding City, Hebei kwiPhondo, China
Isisa | Imisebenzi yesisa yasebusika kaWe ...
Xiong'an Isithili esitsha Xue Ruisha Gr ...
Ukusuka "ukwenza inzuzo" ukuya kwi-entrepren ...